Ukuqala kwam ukuvela-iGeofumadas
umbono yam yokuqala
ILeica Airborne CityMapper - isisombululo esinomdla kwimephu yedolophu
Kulindeleke ukuba singaze siyibone iSmartCity eyinyani, kunye nombono wayo oqinisekileyo. Kungenzeka ukuba kukho iimfuno ezisisiseko kwiimeko zethu kunokucinga nge-Intanethi yezinto. Nokuba oko kwenziwa ngabavelisi bezisombululo akukho mntu ubabuzileyo. Inyani yile yokuba ugqatso lokuzibeka ...
BIM DigitalTwin yasebukhosi- umbono yam yokuqala SmartCities
Kwinqaku elinomdla kakhulu elipapashwe kutshanje nguDavid Mckittrick, apho athetha khona malunga nefuthe lolwazi olwaneleyo lweendlela ezinxulumene nokusebenza neLiDAR kwi-GIS kunye nokubhekisa kwi-Global Mapper njengesixhobo senkxaso ekusetyenzisweni kwedatha efunyenweyo. Emva kokufunda inqaku ndehla ...
Kwizicwangciso zeGeofumadas zango-2012 kuvavanyo lwezicelo ze-Android, kuthathelwa ingqalelo ukuba yinto engenakuphikiswa. Siyazi ukuba iApple iyakuhlala ikwindawo entle kwinqanaba leselula kodwa ngokungafaniyo nayo yonke into ejikeleze isangqa esivaliweyo sika-Apple, i-Android iya kuba nokukhula okungaphephekiyo. Ke…
Android iPad umbono yam yokuqala
Ukuba ucinga ukuthenga iNetbook, mhlawumbi iDell mini 10 inokuba lukhetho. Ngexabiso lijikeleze i-US $ 400, ngaphantsi kwe-Acer Aspire One yasekuqaleni ekuqaleni. Ingaphezulu okanye incinci (ingaphantsi kokuninzi) ilingana ne-Acer D255-2DQkk, icacisa ukuba le nguqulo (1018) sele ...
Zobunjineli, Ukuprinta kokuqala
Ukulandela ukuthengwa kweTrimble kweAshtech, iSpectra iqalile ukukhuthaza iimveliso zeMappa eziSelfowuni. Eyona ilula kwezi yiMobile Mapper 10, endifuna ukuyijonga ngeli xesha. Iinguqulelo zeMobile Mapper Pro, i-CE kunye ne-CX ziphelele apho nangona isekhona kwintengiso ...
GPS umbono yam yokuqala
cadastre, Okufumaneka, GPS / Izixhobo, ezintsha, Ukuprinta kokuqala
Imephu yeBentley PowerView V8i, umbono wokuqala
Ndifumene uhlobo lwePowerView V8i Select Series 2 (Inguqulelo 8.11.07), umgca wezoqoqosho kwindawo yemephu uBentley anethemba lokuyisebenzisa. Ekuqaleni, amanye amathandabuzo am aphelisiwe kwisithuba esedlule xa bendibonisa imigca emithathu yendawo ye-geospatial ka-2011. Ukuqala, endaweni yokuba ...
Bentley Systems umbono yam yokuqala
Emva kweentsuku ezimbalwa ndikhangela i-gvSIG 1.9, ukuphelelwa kwam ngumonde ngenxa yempazamo kunye nezinye iingxaki, namhlanje ndibuyela kumcimbi we-gvSIG. Ukungayichukumisi le software ixesha elide kuye kwaba nemveliso kum, kuba ukuvula le nguqulo intsha kunye nokuyithelekisa nefoto ebendinayo ukusukela kweso sihlandlo ...
Geospatial - GIS, GvSIG, Ukuprinta kokuqala
I-Ashtech kutsha nje isungule imodeli yayo entsha yezixhobo, ebiboniswe kwiNkomfa yaMazwe ngaMazwe ye-ESRI kutsha nje, ebizwa ngokuba yiMobile Mapper 100, eyindaleko eneempawu zeMobile Mapper 6 kodwa eneenkcukacha eziphezulu kuneProMark3. Ngokwenene, eli liqela endikholelwa ukuba uMagellan uzakubamba ...
ESRI GPS umbono yam yokuqala
NgoJuni ka-2010 kuye kwanikelwa ingxelo yokuba i-ArcGIS 10 izakufumaneka, nesibona ukuba iya kuba linyathelo elibalulekileyo lokuqonda inqanaba lokuma kwe-ESRI kwicandelo le-geospatial. Sele kwiiforum nakwezinye iindawo kukho intetho eninzi, kwaye ngokuqinisekileyo ukusuka apha ukuya kwiNkomfa yaBasebenzisi kaJulayi, siya kuba nakho ukwazi okungakumbi. Ukuya kumgangatho ...
ESRI umbono yam yokuqala
ArcGIS-ESRI, Geospatial - GIS, ezintsha, Ukuprinta kokuqala
Ndikucebisa ukuthatha umzuzwana ukwazi loo bhlog, ngoku efikelela kunyaka wokusebenza. Ndithetha ukuba iConstrucGeek, le mizuzu mithandathu ubunethemba lokuyichitha ufunda i-geofumed entsha kufuneka ichithwe kule bhlog. Kukho amathuba amabini kuphela: ukuba uyaqonda ukuba umxholo weCAD onxulumene nobunjineli awukho ...
Blog umbono yam yokuqala
AutoCAD-AutoDesk, Zobunjineli, ezintsha, Ukuprinta kokuqala